jeer dhibaataysnahay si tilmaamay in soo laabashada Ciise | Apg29
jeer dhibaataysnahay si tilmaamay in soo laabashada Ciise
Waxaa si dhib leh ayaa ka soo baxsaday kartaa ogaanaya maalmood ee la soo dhaafay news, oo aan la yaabanahay haddii ay ka badan Waxaan qabaa, "calaamooyinka wakhtiyada" marka aan eegno kuwanu?
Waxaan ku soo maray labada qoraal ee Qaramada Midoobay, kaas oo ku tageen Dadka waxaa si fudud ku hanjabay haddii ay arrimuhu sii, iyo xiriirka siyaasadeed waqti la US, North Korea iyo Iran, taas oo kaliya dedejisaa oo waa fudud ah qoriga qarxa.
Sida hadalka nebiyadii, waxaa jira dhowr markhaatifurkaaga ka walaalaha, kuwaas oo soo maray racfaanka, labadaba marka la eego dagaalka, meesha North Korea iyo Iran waa qayb. Wax walba waa in la baaro, laakiin sida ay u taagan, innagu ma nihin kuwo ka fog ee "xanta" si dhab.
North Korea iyo Iran
Kim Jong-un, Madaxweynaha North Korea ayaa, ayaa imika uun dhammaysay gantaal labaad toogtay toddobaadkii, in kastoo ballanqaadyo hore in Kim ma fulin lahaa baaritaano gantaal dheeraad ah.
Isla mar ahaantaana, xiriirka America ee la Iran waa mid aad u kacsan, kadib markii Iran ayaa ku hanjabay in ay ka soo baxdo heshiiska nuclear waxaa saabsan ma sii si loo kobciyo uranium.
Russia iyo Shiinaha oo taageeray Iran, iyo cambaareeyay cadaadis US iyo cunaqabatayn.
Netanyahu ayaa sidoo kale u jawaabay Iran ayaa hadal, oo comment, in "Israa'iil uma oggolaan doono in Iran in ay hub nuclear." US kordhiyaa cadaadiska on Iran by gobolka Forvägen ku kacsan diraya sidayaal diyaaradaha iyo diyaarado dagaal.
Muujintii 5: 9-10 - Oo waxay ku gabyeen gabay cusub: "Adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabadihiisa furto, waayo, waxaad la laayay, iyo dhiig leh aad soo iibsatay noo waayo, Ilaah ka qabiil kasta iyo af kasta iyo dad oo quruun. Waxaad naga dhigtay boqortooyo iyo wadaaddo Ilaahayaga, oo aan boqor buu ahaan doonaa dhulka. "
Waxaa jira song ah in Rabbigu idin siiyey iyo ku riday qalbigaaga. Waa hees aan ninna weli ayaa ku J ama maqlay dhawaaqa. Waxaa ku dhashay, oo waa la ilaaliyay in dunida oo jannada. Waxaa nagu sugayeen, oo waa gabay jannada, kaas oo loogu talagalay oo heegan u badnaa Rabbiga u doortay oo furtay.
Waa gabay oo dhaqdhaqaaqa qalbigii Ilaah, iyo in Malaa'igta oo kaliya ku riyoon in aan awoodo in la qaado oo qayb ka mid ah noqon.
Laakiin waxaa kaliya oo qof kuwaas oo ka soo furtay nolosha this uu dumo, kuwaas oo ku raaxaysan karaan oo ha gabyeen gabaygan. Dadka la nadiifiyey by dhiiggii qaaliga ahaa oo Wanka, nafaha kuwaas oo qaatay guushii Ciise iskutallaabta oo uu sameeyey.
Si dhakhso ah, sida ugu dhaqsaha badan
song waxaa la siiyaa dadka loo yeedhay, loo dejiyay oo la soo xulay ka hor Foundation Dhulka, - dadka yihiin kuwa badbaadayaa by nimcada Ilaah, kuwaas oo magacyadooda ku qoran yihiin kitaabkii qaali ah.
Si dhakhso ah, sida ugu dhaqsaha badan, waxaan loo oggolaan doonaa inay ammaan ah taariikhda ee ugu weyn gabyi gabyi - tasbiixso iyo qadarin ah in Ciise Masiix, wanka gowracay.
Ciise waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda!
jeer naxaysaan fiiqaya in soo laabashada Ciise!
Vecka 29, söndag 21 juli 2019 kl. 15:06